Eyona ndlela ilula neyona ilula yokukhuphela iividiyo zikaYouTube kunye nomculo zivela kwiYTzip.com apho unokwenza khona ukhuphelo lwevidiyo yeYouTube ngendlela elula.
I-YouTube.com yeyona ndawo idumileyo yeevidiyo, iimuvi, iingoma kunye nezinye izinto. Kodwa kwiYouTube awukwazi ukukhuphela ividiyo yeYouTube.
I-YTzip.com ikubonelela ngokukhuphela nayiphi na iVidiyo yeYouTube mahala. Ke, qhubeka nokukhuphela ividiyo kwi-YouTube.
Ungayikhuphela njani ividiyo yeYouTube kwiYTzip.com?
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ungazikhuphela njani iividiyo zeYouTube kwifom ytzip.com simahla?
Inyathelo 1: - Khuphela ikhonkco levidiyo yakho ye-YouTube ofuna ukuyikhuphela kwaye uye ku-YTzip.com elidlulileyo kwikhonkco ebharini kwaye ucofe iqhosha lokukhuphela. kwaye uqhubeke nokukhuphela ividiyo ye-YouTube.
Inyathelo 2: -Khetha ifomathi yefayile oyithandayo (MP4 okanye iMP3 kunye nezinye iifomathi)
Inyathelo 3: - Emva kokukhetha kuya kuqala ukukhuphela ividiyo. Ngoku ungonwabela ukhuphelo lwevidiyo yakho yeYouTube.
Ungayenza njani ukhuphelo lwevidiyo yeYouTube kwiMP3 okanye kwiMP4 kuYTzip.com?
Ukukhuphela ividiyo ye-YouTube kwifomathi ye-MP3 okanye ye-MP4 kufuneka usebenzise ukhetho lweefomathi ngaphambi kokuba uqhubekeke ukhuphele kwiSiza seYTzip.com
Ungayenza njani ukhuphelo lwevidiyo yeYouTube kwiselfowuni yakho kwi-YTzip.com?
Inyathelo 1: -Vula ividiyo ye-YouTube kwifowuni yakho yeyiphi ividiyo ofuna ukuyikhuphela.
Inyathelo 2: - Emva koko ucofe iqhosha u "share" kwividiyo. iya kuba ngezantsi kwevidiyo kwaye emva koko ucofe ku "ikopi yekhonkco" kwaye uqhubeke nokukhuphela ividiyo ye-YouTube.
Inyathelo 3: - Vula i-YTzip.com kwaye udlule ikhonkco kwibha kwaye ucofe iqhosha lokukhuphela.
Inyathelo 4: - Khetha ifomathi yefayile ofuna ukuyisebenzisa kwaye ucofe ukhuphelo. Khawulezisa ukhuphelo lwevidiyo yakho ku-YouTube luchaziwe ngoku lakugqiba ukonwabela ividiyo.
Kutheni le nto kufuneka ukhethe i-YTzip.com yokukhuphela ividiyo kwi-YouTube?
Eyona Webhusayithi ibalaseleyo ikwi-intanethi yokukhutshelwa kwevidiyo kuYouTube yi-YTzip.com inika ezona fomathi zifanelekileyo zokukhuphela ividiyo kunye nomgangatho wevidiyo ikwayimifanekiso kwaye isandi silunge kakhulu. Ke, ungasebenzisa i-YTzip.com kwi-YouTube yokukhuphela ividiyo.
Ungayenza njani ukhuphelo lwevidiyo yeYouTube kwikhompyuter yakho kwi-YTzip.com?
Inyathelo 1: -Vula ividiyo ye-YouTube kwikhompyuter yakho yeyiphi ividiyo ofuna ukuyikhuphela.
Inyathelo 2: - Emva koko ucofe iqhosha u "share" kwividiyo. iya kuba ngezantsi kwevidiyo kwaye emva koko ucofe ku "ikopi yekhonkco" OKANYE unokukopa ikhonkco ngqo kwindawo yedilesi. kwaye uqhubeke nokukhuphela ividiyo ye-YouTube.
Wakhe weva malunga ne-YTzip.com?
I-YTzip.com kulula kakhulu ukuhamba kwindawo yakho kwi-pc yakho kwaye iyahambelana neselfowuni kwi-YouTube yokukhuphela ividiyo. Olona khetho lufumanekayo kwi-intanethi kukhuphelo lwevidiyo yeYouTube yi-YTzip.com.
Ungayenza njani ukhuphelo lwevidiyo yeYouTube kwithebhulethi yakho kwi-YTzip.com?
Inyathelo 1: -Vula ividiyo ye-YouTube kwithebhulethi yakho yeyiphi ividiyo ofuna ukuyikhuphela.
Ukhuphelo lwevidiyo kaYouTube usebenzisa i-YTzip.com
Inyathelo 1: - Vula i-YTzip.com ye-YouTube yevidiyo yokukhuphela ividiyo kwaye ufake i-URL yevidiyo ye-YouTube kwibhokisi yebhokisi, phezulu kwiphepha kwiYTzip.com.
Inyathelo 2: - Emva koko ucofe ku "Khuphela" iqhosha.
Inyathelo 3: - Khetha ifomathi yefayile ofuna ukuyisebenzisa kwaye ucofe ukhuphelo. Khawulezisa ukhuphelo lwevidiyo yakho ku-YouTube luchaziwe ngoku lakugqiba ukonwabela ividiyo.
Inyathelo 4: - YTzip.com Kulula kakhulu ukuhamba kwisiza sokukhuphela ividiyo ye-YouTube.
Uyenza kanjani i-YouTube yokukhuphela ividiyo kwiifomathi ze-mp3 kuphela zomculo kuphela.
Inyathelo 3: - Khetha ifomathi yefayile mp3 kwaye ucofe kukhuphelo. Khawulezisa ukhuphelo lwevidiyo yakho ku-YouTube luchaziwe ngoku wakugqiba ukonwabela umculo wakho.
Ndingazikhuphela njani iividiyo zeYouTube kunye nevidiyo ezimfutshane?
Inyathelo 1: -Vula ividiyo ye-YouTube okanye iifutshane zevidiyo kwifowuni yakho okanye kwikhompyuter yeyiphi ividiyo ofuna ukuyikhuphela.
Ungazikhuphela njani iividiyo kwiYouTube?
Inyathelo 1: -Vula ividiyo ye-YouTube okanye iifutshane kwiividiyoifowuni yakho okanye ikhompyuter yeyiphi ividiyo ofuna ukuyikhuphela.
Ndingazikhuphela njani iividiyo zeYouTube ngokuthe ngqo?
Ngubani onokukhuphela iividiyo zikaYouTube?
Nabani na onokuzikhuphelela iividiyo zeYouTube eyona webhusayithi ilapha apho unokukhuphela khona iividiyo zeYouTube ngu-https: //ytzip.com/ weVidiyo yeYouTube yokukhuphela le webhusayithi yenye yeyona webhusayithi ilungileyo yokukhuphela ividiyo ye-YouTube, unokukhetha ukukhuphela kumgangatho owahlukileyo. , unokuzikhuphelela ngaphandle komsindo, unokuzikhuphelela iaudiyo kuphela, okanye ukhuphele ividiyo kunye nevidiyo kunye nomgangatho wevidiyo kunye nevidiyo nayo intle. ke, qhubeka nokukhuphela ividiyo kwi-YouTube.
Yeyiphi eyona YouTube yokukhuphela ilungileyo?
https://ytzip.com/ le webhusayithi yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokukhuphela ividiyo yeYouTube, unokukhetha ukukhuphela kumgangatho owahlukileyo, unokukhuphela ngaphandle komsindo wokukhuphela ividiyo yeYouTube, unokukhuphela iaudio kuphela, okanye khuphela ividiyo kunye nevidiyo kunye nevidiyo kunye nomgangatho wevidiyo kunye nevidiyo nayo ibalasele. ke, qhubeka nokukhuphela ividiyo kwi-YouTube.
Ungazikhuphela njani iividiyo ezivela kuwe?
Eyona webhusayithi ilungileyo ukusuka apho unokukhuphela khona iividiyo zikaYouTube ngu-https: //ytzip.com/ le webhusayithi yenye yezona webhusayithi zibalaseleyo ukukhuphela ividiyo ye-YouTube, unokukhetha ukukhuphela kumgangatho owahlukileyo wokukhuphela ividiyo ye-YouTube, unokukhuphela ngaphandle iaudiyo, unokukhuphela iaudiyo kuphela, okanye ukhuphele ividiyo kunye nevidiyo kunye nomgangatho wevidiyo kunye nevidiyo nayo ibalasele. ke, qhubeka nokukhuphela ividiyo kwi-YouTube.
Ungazikhuphela njani iividiyo zeYouTube
Yiya ku-YTzip.com kwaye udlule kwi-URL yokukhuphela ividiyo ye-YouTube ofuna ukuyikhuphela kunye nexesha elidlulileyo kwiqhosha lokukhuphela eliya kuqala ukukhuphela. ke, qhubeka nokukhuphela ividiyo kwi-YouTube.
Yeyiphi indawo efanelekileyo yokukhuphela iividiyo zikaYouTube?
I-YTzip.com le webhusayithi yenye yezona webhusayithi zibalaseleyo zokukhuphela ividiyo yeYouTube, unokukhetha ukukhuphela kumgangatho owahlukileyo, unokukhuphela ngaphandle komsindo wokukhuphela ividiyo yeYouTube, unokukhuphela iaudiyo kuphela, okanye ukhuphele ividiyo zombini iaudiyo nevidiyo kunye nomgangatho wevidiyo kunye nevidiyo nayo intle kakhulu ngokukhutshelwa kwevidiyo yeYouTube. ke, qhubeka nokukhuphela ividiyo kwi-YouTube.
Ndingazikhuphela njani iividiyo zeYouTube 2020 okanye 2021?
Unokuzikhuphelela iividiyo zikaYouTube 2020 okanye 2021 Vula ividiyo yeYouTube okanye ushicilele ividiyo emfutshane kwifowuni yakho okanye kwikhompyuter yeyiphi ividiyo ofuna ukuyikhuphela emva koko ucofe iqhosha "share" kwividiyo. iya kuba ngezantsi kwevidiyo kwaye emva koko ucofe ku "ikopi yekhonkco" kwaye uqhubeke nokukhuphela ividiyo ye-YouTube. Emva koko vula i-YTzip.com kwaye udlule ikhonkco kwibha kwaye ucofe iqhosha elithi "Khuphela". Ekugqibeleni Khetha ifomathi yefayile ofuna ukuyisebenzisa kwaye ucofe ukhuphelo. Khawulezisa ukhuphelo lwevidiyo yakho ku-YouTube luchaziwe ngoku lakugqiba ukonwabela ividiyo.
Uyikhuphela njani ividiyo yeYouTube?
Ukukhuphela ividiyo yeYouTube, vula ividiyo yeYouTube okanye wenze iifutshane zevidiyo kwifowuni yakho okanye kwikhompyuter yakho ukhuphelo lwevidiyo yeYouTube yeyiphi ividiyo ofuna ukuyikhuphela emva koko ucofe iqhosha elithi "share" kwividiyo. iya kuba ngezantsi kwevidiyo kwaye emva koko ucofe ku "ikopi yekhonkco" kwaye uqhubeke nokukhuphela ividiyo ye-YouTube. Emva koko vula i-YTzip.com kwaye udlule ikhonkco kwibha kwaye ucofe iqhosha elithi "Khuphela". Ekugqibeleni Khetha ifomathi yefayile ofuna ukuyisebenzisa kwaye ucofe ukhuphelo. Khawulezisa ukhuphelo lwevidiyo yakho ku-YouTube luchaziwe ngoku lakugqiba ukonwabela ividiyo.